2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Ethiopia Claims Victory in Tigray Conflict After Shelling Restive Region’s Capital – The New York Times
Ethiopia News November 29, 2020
Ethiopia Claims Victory in Tigray Conflict After Shelling Restive Region’s Capital The New York Times Capital of Ethiopia’s Tigray region under control of Ethiopian forces, says PM after intense bombardment CNN Ethiopia declares victory as military takes Tigray capital The Associated Press Ethiopia says its military has taken Sii akhriso
Cayaaraha November 28, 2020
(Madrid) 29 Nof 2020. Deportivo Alaves ayaa guul ka soo heshay kooxda Real Madrid oo ay ku booqatay garoonka Alfredo Di Stefano, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga. Qeybbtii hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Deportivo Alaves. Daqiiqadii 5-aad […]Sii akhriso
Soomaaliya November 28, 2020
Niamey (SONNA)-Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Balal Maxamed Cusman, ayaa hoggaamiyay wafdiga Soomaaliya uga qeybgalaya shirka 47aad ee Golaha Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee Ururka Iskaashiga Islaamka oo shalay oo Jimce ahayd ka furmay Magaalada Niamey ee Caasimadda Dalka Niger. Shirka oo loogu talogalay inuu socdo maalmaha 27 iyo 28 Sii akhriso
(Madrid) 28 Nof 2020. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Real Madrid iyo Deportivo Alaves ee horyaalka La Liga ayaa la shaaciyey. Kooxda Real Madrid ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Deportivo Alaves si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli […]Sii akhriso
Ethiopia News November 28, 2020
Capital of Ethiopia’s Tigray region under control of Ethiopian forces, says PM after intense bombardment CNN Ethiopia says its military has taken control of capital in defiant Tigray region The Washington Post Ethiopia’s Tigray capital reported to be “heavily bombarded” CBS News Ethiopia says its military now Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Ra’isulwasaaraha Itoobiya ayaa lagu sheegay In Mekelle ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidanka Itoobiya taas oo calaamad u ah soo afjarida wajigii ugu danbeeyay howlgalka sharci soo celinta. Qoraalka lagu sheegay in ciidanka ay sameeyeen arimo ay ka mid yihiin xaqiijinta siideynta maxaabiis ka tirsan […]Sii akhriso
(Manchester) 28 Nof 2020. Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Burnley, kaddib markii ay kaga adkaatay 5-0, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League ee dalka England. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 3-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Manchester City. Daqiiqadii 6-aad Manchester City […]Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- Ciidamada amniga ayaa gacanta ku soo dhigay qofkii tuuray Bam gacmeed caawa lagu weeraray saldhiga degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Sida laamaha amniga ay sheegeen, ma jirto cid waxyeelo ka soo gaartay Bam gacmeedka lagu tuuray Saldhiga degmadaas. Ciidamada amniga ayaa dardar gelinaya howgallada lagu xoojinayo amniga caasimadda si aysan cadowgu Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):- Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo kulan degdeg ah isugu yeeray laamaha amniga ayaa ka dhageystay warbixin la xiriirta amniga dalka, gaar ahaan falkii argagixisadu ay xalay ku gumaadeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxba galabsan. Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku adkeeyey laamaha ammaanka in ay waajib Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA):– Wasaaradda Caafimaadka Galmudug ayaa maanta kala wareegtay hey’adda IRC, qalab iyo daawooyin caafimaad oo loogu talagaley xarunta la tacaalka xanuunka Covid-19 ee Gobolka Galgaduud waxaana deeqdani katimid deeq bixiyaasha xafiiska arrimaha dibadda ee dowlada Jarmalka (GFFO) Wasiirka Caafimaadka ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdiwali Sii akhriso